Hurumende Inokwidza Zvikamu Zvemitero Pamari Dzinotambirwa
Live Talk -The Connection with Mike Hove
Hurumende yawedzera mari dzichange dzisingabatirwi mutero pamwedzi kutanga mwedzi uno, kubva pa$30 million kuenda pa$300 million, kunyange hazvo mari iyi ichinzi haina zvainobatsira pachitariswa mamiriro ezvinhu munyaya dzeupfumi.
Vamwe vanoongora zveupfumi vanoti hapana zvikuru zvaitwa nehurumende, sezvo yakwidza zvikamu zvemitero kuvanhu vanotambira mari dziri pamusoro, izvo zviri kuonekwawo nevamwe senzira yekudzosa mari dzakadhindwa munguva yesarudzo.
Vanotambira mari dziri pakati pe $5 billion ne$10 billion pamwedzi, vave kuzobatirwa mutero wezvikamu makumi mashanu kubva muzana, uye vanopfuurawo $10 billion vachibatirwa 52, 5 %. Vari pamusoro $20 billion vanenge vobatirwa 60 % pamwedzi.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi, Doctor Godfrey Kanyenze, vaudza Jonga kandemiiri weStudio 7 kuti kana pakaita shanduko muhurumende, vanopinda vanotoda mwedzi inodarika mitanhatu kuti vagadzirise zvinhu munyaya dzeupfumi.